Suldaan Qaboos oo caan ahaa Carabkii ugu waqtiga dheeraa ee xil hayay oo geriyooday. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaSuldaan Qaboos oo caan ahaa Carabkii ugu waqtiga dheeraa ee xil hayay oo geriyooday.
Suldaan Qaboos oo caan ahaa Carabkii ugu waqtiga dheeraa ee xil hayay oo geriyooday.
January 11, 2020 marqaan Faalloyinka, Somali News 0
“Anaga oo aad uga xun ayaa waxay boqortooyada u murugoonaysaa geerida boqor Sultan Qaboos bin Sacad, oo Jimcihii geeriyooday ,” ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay boqortooyada Cumaan.
Waxaa jira warar sheegayay in uu hayay cudurka Kansarka.
Saddex maalmood oo barooq-diiq ah ayaa looga dhawaaqay dalkaasi Cumaan.
Boqor Qaboos ayaa afgembi aan dhiig ku daadan xukunka uga tuuray aabihii isaga oo taageero ka helayay Britain sanaddii 1970.
Isaga oo isticmaalaya shidaalka uu dalka Cumaan hodonka ku yahay waxaa uu dalkaasi cagaha saaray dhabadii hormarka.
QM oo sheegtay in Somalia dhaqaale la’aan aawgeed ay ku waayi doonto kursigii ay kulahayd Golaha Qaramada Midoobe.